Shahaadada RHCE - Sida loo noqdo Engineer Red Red Certified - ITS
Waa maxay RHCE?
Sidee loo helaa Shahaadada Agaasimaha Casriga ee Red Hat?
Waa maxay RHCSA?
Maxay tahay sababta aad u heshay Shahaadada Agaasinka Cas ee Red Hat?
Engineer Red Red Certified, Shahaadada RHCE waa "shahaadada flagship" oo ka timid Red Hat. Waa mid dhexdhexaadinaysa shahaadada heerka sare waxaana lagu xaqiijin karaa Maamulaha Agaasimayaasha Red Hat Certified System (RHCSA) kaas oo leh aqoon korodhsi, aqoon, xirfad iyo karti looga baahan yahay maamulaha nidaamka sare ee maamulaha Red Hat Enterprise Linux® (RHEL ) nidaamyada. Shahaadada RHCSA waa shahaadada heerka galitaanka ee maamulaha nidaamka. Waxaad u geli kartaa RHCE-da markaad u tababaratay RHSCA oo aad ka heshay shahaadadaada.
Xarunta Red Hat waxay bixisaa heerar kala duwan oo ah barnaamijyada shahaadaynta. Shahaadada RHCSA waa mid ka mid ah shahaadada ugu caansan ee ka timid shirkadda Red Hat. Red Hat waxay bixisaa imtixaan-bixinta shahaadada kaliya kaddib marka la dhammeeyo barnaamijka tababarka. Tababarka waxaa loogu talagalay dhammaan khabiirada IT-da ee ku yaalla meelo badan oo ka shaqeeya goobo shaqo oo muhiim ah oo Linux ah oo ay ku jiraan rakibo, abuuritaanka isku-xirka shabakada, xafididda jir-dhiska, iyo maareynta amniga aasaasiga ah.
Haddii aad go'aansatay inaad noqoto RHCE, waa inaad raadisaa shabakada Red Hat Websaytka oo ah wada-shaqeeye tababaran oo ku dhow magaaladaada. Kadib waxaad la xiriiri kartaa hay'adaha u xilsaaran oo iska diiwaangeliya RHCSA. Si aad u nadiifiso imtixaanka injineerada loo yaqaan 'Red Hat Certified Engineer', waa inaad heshaa aqoonta dhammaan mawduucyada barnaamijka tababarka iyo sidoo kale dhinacyo kale, sida habka xalalka shabakada. Xiriiriyaha tababarka wuxuu ku siin doonaa qalabka tababarka iyo koorsooyinka mawduucyada la xiriira. Waxaad dooran kartaa inaad u timaaddo imtixaanka shahaadada Red Hat sida ku cad jadwalka aad dooratay. Kulamada tijaabada waxaa lagu qabtaa nidaam ammaan ah oo ah xarun tijaabo oo si habboon loo maamulay. Waxaad sidoo kale fiirin kartaa hababka kala duwan ee Red Hat tababarka iyo si habboon u qorshee kulannada imtixaanka.
RHCSAwaa imtixaan koorso heer-gelis ah oo loola jeedo shaqada aasaasiga ah ee musharraxiinta doonaya in ay noqdaan maamul khibrad Linux ah iyagoo soo bandhigaya fikradaha muhiimka ah ee taliska iyo qalabka kale ee mashruuca. Fikradahaas waxaa lagu sii kordhiyaa Maamulka Red Hat System II. Si loo xaqiijiyo shahaadada RHSCA, musharrixiintu waa inay ku aflaxaan EX200, imtixaan shaxda 2.5-saac. Dhibcaha ugu hooseeya ee imtixaanka waa 70%.
Soo-koobidda koorsada imtixaanka RHCSA:
Soo koobista aragtiyaha asaasiga ah
Tilmaamaha kaydinta jirka
Baro rakibaadda iyo qaabeynta adeegyada software iyo qaybaha
Hirgelinta adeegga firewallka iyo xidhiidhada shabakada
Maamulidda iyo kormeerka geedi socodka
Xaqiijinta iyo ilaalinta faylasha
Maaraynta dadka isticmaala iyo kooxaha
Si aad u hesho qaababka faylka Linux
Sameynta iyo hirgelinta nidaamyo loo dhanyahay
Dib-u-fiirinta faylasha qoraalka
RHCSA waa shahaadada heerka "entry-level" oo lagama maarmaan u ah inay noqoto injineer shahaadada casriga ah. Koorsada Shahaadada RHCE waxay u tahay injineerada, maamulayaasha nidaamka, maamulayaasha codsiyada, sanandheynta iyo maamulayaasha daruuriga iyo horumarinta shirkadaha, kuwaas oo khibrad u leh fulinta RHEL ee kaabayaasha IT. Koorsadani waxay bixisaa xirfado muhiim ah waxayna hubisaa in musharrixiintu ay noqdaan kuwo ku habboon RHEL iyagoo ku adkeysanaya imtixaannada ku saleysan kartida. Aaminta a Imtixaanka Red Hat Shahaadada waxay fursad u siinaysaa xirfadle ah in ay gaaraan bulshada Red Hat, ay sameeyaan kooxo daraasad; ka wada shaqeeyaan mashaariicda iyo sida loo wajaho loo-shaqeeyaha mustaqbalka
Halka imtixaanaadka shahaadooyinka qaarkood ay waydiiyaan su'aalo noocyo kala duwan leh oo ku saabsan tiknoolajiyada qaarkood, in la dhimo wixii imtixaan ah ee Red Hat waxay u baahan tahay inaad sameyso shaqooyinka aduunka adoo adeegsanaya khibrada Red Hat. Inkasta oo aysan jirin shuruud u dhiganta kooraskan, waaya-aragnimo hor leh ee maareynta nidaamka hawlgalka waa inay noqotaa mid faa'iido leh.
ASP.NET ee OpenShift: Bilaabidda ASP.NET